Ikhosi yeJava yokufunda ukuqala - Geofumadas
Ikhosi yeJava yokufunda ukususela ekuqaleni
Agasti, 2011 Ukufundisa i-CAD / GIS, Internet kunye neBlogs
Kwiintsuku ezimbalwa ezedlule ndandithetha ngazo ezinokubakho iJava ekumiselweni kwayo ngokubhekisele kwezinye iilwimi kwimo yendalo esingqongileyo. Kule meko ndiza kuthetha ngesinye sezifundo endizithathayo ngobusuku bam bokuzonwabisa; eluncedo kakhulu ukulandela uphuhliso lwesixhobo esinomdla phakathi kwesiseko se-cadastral basic / MySQL kunye nendawo ye-gvSIG.
Abasebenzisi abalindele ukufunda iJava ngokusisiseko, ngokuqinisekileyo eyona ikhosi ifanelekileyo, eyaziwa ngokuba yiJava Web, nangona abahlobo bezi zifundo bandixelele ukuba abaqulunqi beenkqubo ngeenjongo zokuhlengahlengisa uqeqesho lwabo lweJava ngcono njengabo ukuze bafunde ngokubanzi.
Izibonelelo zokuthatha ikhosi ngokufanelekileyo.
Amaqonga e-Intanethi eze kulungiselela ukufikelela kwizifundo ezizodwa, ethatha ithuba lezibonelelo ezibonelelwa ngetekhnoloji, unxibelelwano kunye nomxholo wemultimedia. Olunye lwezibonelelo kukuba into yokuba umfundi enze isigqi sakhe, ukufikelela ngexesha elimfaneleyo; nangona oku kufuna ukuziqeqesha ukuze wenze konke ukufikelela kumxholo oqhele ukubakho ngelixa uthatha isifundo. Kule meko, kanye nje ubhalisele ikhosi ziyafumaneka kwiinyanga ezintathu.
Ngaphandle kwemibuzo ebinayo enye le misebenzi kwi-Intanethi, ukusikelwa umda komxholo oprintwe okanye osasazwe kwi-CD yesifundo esiqhelekileyo soyiswa ngokufikelela kwividiyo, kwiinkcazo-ntetho okanye kwezinye izinto ezisebenzayo. Kwimeko ye GlobalmentoringIcandelo ngalinye linevidiyo nevidiyo yeSpanish, onokuthi uthathe icandelo ngalinye lesifundo ngenyathelo. Umzekelo endiwubonisa kumfanekiso yiModyuli III, ejolise kunxibelelwano lweedatha, kwicandelo nje apho kuchazwa ukusebenza kwe-Eclipse njengomphathi wedatha yabathengi.
Ndiye ndachukunyiswa ukuba iividiyo zinikezelwa kuzo zombini iFlash kunye ne-css / HTML5 ukuze zijongwe kwizixhobo zefowuni ... ah! nangeSpanish.
Ke kukho inkxaso ekude; Kwimeko yam, imeko-bume engenasisekelo yenzekile kum ekuqaleni, endiya kuyisebenzisa njengomzekelo. Ndaphuhlisa imodyuli I, ndaqokelela iiklasi zokuqala ezilandela nje amanyathelo eziboniswa yividiyo, kodwa kum inguquko Dell Inspiron Mini Ndagqiba kwelokuba ndiyenze njengoko ndikhumbula kwaye ndingalandeli inyathelo ngenyathelo. Ndafikelwa bubuthakathaka phantsi kofakelo, ndibhalisa ubume bendawo esingqongileyo umbonisi obonakala ngathi akayamkeli (Javac.exe). Xa ndiziva ndibuhlungu, ndiye ndagqiba kwelokuba ndimakishe inkxaso ye-Skype yomfundisi-ntsapho, kwaye ndiye ndabona ukuba kwakulula njengokuvala iwindows ye-DOS yefestile kwaye uyiphakamisa kwakhona, kuba esi sixhobo se-prehistoric Windows siphakamisa eziguquguqukayo ezibhalisiweyo ngexesha lokuphumeza. kodwa awukwazi ukubona utshintsho olwenziwayo ngelixa lusebenza.
Umxholo wekhosi yeJavaWeb.
Apha ngezantsi ndishwankathela umxholo wale khosi, owenziwe kwiimodyuli ze-5 eziqala ngokusisiseko zeJava, kubandakanya uqhagamshelo kwiiDatabases kwaye uphela ngokudalwa kwesicelo seWebhu usebenzisa iiVelenda kunye neeJSP. Nangona umxholo ubonakalisa kuphela ngendlela yesikim, ngokwenyani, njengoko kubonisiwe kumfanekiso wesiqwenga seModyuli V, basondele kwiividiyo ze180, nganye nganye ithobela umxholo wethiyori okanye isenzo somsebenzi , kwaye kwisifundo ngasinye kuza ifayile exineneyo ekukhutshelwa kuyo ii-Exercised kunye neeklasi ezihlanganisiweyo.
Imodyuli I. Java evela eZero. (Izifundo ze-3)
Izinto ezisisiseko zoLwimi
Iiklasi kunye nezinto kunye nendlela yokuqonda ngokwenene
Imodyuli II Inkqubo yeJava kunye neNgcali yeNkqubo: (Izifundo ze-5)
Fikelela kwiimowudi kunye nokusetyenziswa kwazo kwiJava.
Iiklasi eziphakathi kunye neendlela zokuhlangana.
Imodyuli III Unxibelelwano kwiiDatabases ngeJDBC: (Izifundo ze-3 kunye nezihloko ezikhethwe yi-8)
Unokwenza njani unxibelelwano kwiDatabase.
Iipateni zoyilo ekuyilekeni kweDatha.
Izinto ezisisiseko ze-HTML.
Yintoni i-CSS kwaye isebenza phi?
Imodyuli IV Ukuphuhliswa kwamaphepha ashukumisayo aneeVeki kunye neeJSP: (Izifundo ze-7)
Yintoni isicelo eshukumayo?
Zithini i-Servicelets kwaye zisebenza phi?
Isicelo se-HTTP / Inkqubo yokuphendula.
Zithini iJJs kwaye zisebenza phi?
Umboniso obonisa uLwazi lokuFikisa (EL) kunye neJSTL.
Ipateni yoyilo lweMVC.
Ukwenza isicelo seWebhu yeJava.
Ekupheleni kwekhosi, kwenziwa isicelo seWebhu sisebenzisa eyona misebenzi ilungileyo kunye nokudibanisa BONKE izihloko ezibonwe kule ndibano, kubandakanya unxibelelwano kwiiDatha, ulawulo lokhuseleko, ezona ndlela zokuziphatha kunye neepateni zoyilo. Njengomsebenzi wokugqibela kunye nemfuneko yokufumana idiploma Elebhu yokugqibela, apho uyilo olunemigangatho eyahlukeneyo luyasetyenziswa.
Kuba le yikhosi ehlala ihlisiwe, ndincoma ukubona ikhonkco.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ngaba kuluncedo ukufunda Java?
Post Next I-GIS Kit, ekugqibeleni into enhle ye-iPadOkulandelayo "
I-4 iphendula "kwikhosi yeJava ukuze ufunde ukusuka ekuqaleni"
inkosi java online
Iphepha elilungileyo kakhulu. Wenza umsebenzi omkhulu.
Ndishiya ikhonkco kum, ndicinga ukuba abasebenzisi bale bhlog banokuba nomdla.
Ukuba uyingcali kwaye ujonge okuthile emntwini, sincoma oku kulandelayoiikhosi ze-java eMadrid naseBarcelona. Siyabazi ngezifundo ezibonelelwe kwinkampani yethu kwaye zintle kakhulu.
isifundo se-java uthi:
Igalelo elihle kakhulu. Kwiminyaka yeekhompyuter, ndikholelwa ukuba uqeqesho kule ndawo luvula amathuba ezinqanaba kwinqanaba lobungcali ngokufanelekileyo. Umsebenzi weengcali zenkqubo ufuneka kakhulu kwiindawo ezininzi, ke ukubonelelwa kwabasebenzi kubanzi kwaye kwahluka.